Blender Player Apk 2022 Download Ho an'ny Android | APKOLL
Blender Player Apk 2022 Download Ho an'ny Android
Jona 3, 2022 Febroary 2, 2022 by Reyan Ahmad
Salama daholo, te hanao sary mihetsika amin'ny alàlan'ny fitaovanao Android ianao? Raha eny dia eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Blender Player. Izy io dia ny kinova Android blender, izay ahafahan'ny mpampiasa manao sary mihetsika amin'ny alàlan'ny finday avo lenta.
Araka ny fantatrao ankehitriny dia tia mijery sary, sary mihetsika, ary zavatra foronina hafa ny olona. Noho izany, ny blender azy dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra, izay ahafahana mamita ny fampivoarana ny sarimiaina. Misy zavatra hafa an-taonina, izay azo vita amin'ny alàlan'ity fampiharana ity.
Matetika, ny fampivoarana ny lalao sy ny fanaovana horonantsary 3D dia vita amin'ity rindranasa ity, amin'ny alàlan'ny Laptops sy PC. Noho izany, misy vondron'olona mpampiasa Android lehibe kokoa eny an-tsena koa. Iza no te hampiasa maimaim-poana ny vokany tsara indrindra noho izany, noho izany no nitondranay anao ny fomba tsara indrindra hamitana ny eritreritrao.
Araka ny efa nolazainay, ho an'ny solosaina finday sy ny solosaina PC ihany izany, saingy fantaro fa miaraka amin'ny kinova Android isika. Manolotra ny endriny rehetra amin'ny kinova PC sy ny maro hafa. Hizara ny fitaovana rehetra izahay, izay hidiranao amin'ny alàlan'ny kinova Android. Noho izany, mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ary mankafiza.
Topimaso momba ny Blender Player App
Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra fantsom-pamokarana, ho an'ny fampandrosoana lalao, VFX ho an'ny famokarana sarimihetsika, sarimiaina ary maro hafa. Manolotra loharanom-baovao misokatra ho an'ny olon-drehetra eran'izao tontolo izao izy io, midika izany fa afaka mampiasa an'ity app ity ny olona rehetra, nefa tsy handany vola iray monja.
Manolotra ny endri-javatra maodely tsara indrindra izy io, izay anaovana ny sarimiaina miaraka amin'ny fomba fitenenana tena misy. Manome fitaovana isan-karazany koa izy io, amin'ny alalàn'ny mpamorona sary afaka manao modely tsara indrindra mora foana. Manolotra fiasa mitahiry fotoana, izay iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ity rindranasa ity.
Hizara ny sasany amin'ireo fitaovana tsara indrindra ho an'ity fampiharana ity izahay. Ny fitaovana voalohany, izay hozarainay dia ny fitaovana fanovana, izay azon'ny mpampiasa azy amin'ny famolavolana modely manokana, fa azonao ampiasaina na aiza na aiza. Izy io dia mamela ny fanamafisam-peo, ny fihodinana ary ny fampandehanana ny singa amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo mpitari-dalana.
Ny fitaovana faharoa dia Spin Duplicate, izay ahafahanao manao dika mitovy amin'ny modely. Azonao atao ihany koa ny manaisotra sy manampy dika mitovy, amin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia afaka mampihena ny fizotran'ny fotoana ny mpampiasa. Izy io koa dia manolotra ny hanova ny axe.
Misy fitaovana farany iray hafa, fantatra amin'ny anarana hoe offset edge loop cut. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity dia azonao atao ny manao fizarana andalana amin'ny zavatrao. Ilainao fotsiny ny mifidy ny tadivavarana ary avelao eo amin'ny faran'ny farany, izay hahatonga azy ho fizarazarana.
Misy safidy malefaka ihany koa, ahafahanao manatsara ny sisin'ny zavatra rehetra. Izy io dia hahatonga ny sisiny ho malama kokoa araka ny filanao na azonao atao koa ny manamboatra ny sisiny amin'ny alàlan'ny habe mifanohitra amin'izany. Azonao atao koa ny mamorona endrika isan-karazany amin'ny fampiasana an'io endri-javatra io.
Un Subdivide dia misy ihany koa, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpampiasa dia afaka manisy fanovana tsara sy manao maodely mahatalanjona ihany koa. Misy endri-javatra sy fitaovana an'arivony maro hafa azonao zahana. Noho izany, sintomy ny rindrambaiko Blenderplayer ary manomboka manaova sary mihetsika.
anarana Blender mpilalao
Anaran'ny fonosana org.blender.play
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 2.3 ary ambony
Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra ho an'ny mpamorona sary, izay manolotra fanangonana fitaovana lehibe indrindra hanaovana zavatra. Ny sasany amin'ireo fiasa dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa. Noho izany, hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminao izahay rehetra eto ambany.
Manome loharano misokatra
Fomba tsara indrindra hanaovana maodely 3D
Fampandrosoana ny tontolo iainana amin'ny simulation
Fanangonana fitaovana tsara indrindra
Ny interface dia mitovy amin'ny kinova PC
Izahay dia hizara rohy aminareo rehetra, izay ahafahanareo misintona azy mora foana. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eto amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary andraso segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fisintomana.
Mila rakitra zip hafa ianao raha te hiditra ao. Ka hizara ny rakitra zip amin'ity pejy ity koa izahay, izay tsy maintsy ampidininao. Raha vantany vao vita ny fametrahana ny rakitra Apk dia mila manova ny anaran'ny zip ianao mba hifangaro, avy eo dia mila manokatra ny rakitra Apk ianao ary manokatra ny rakitra mifangaro avy amin'ny rakitra Apk. Hanomboka ny mpilalao izy io.
Blender Player Apk no fampiharana tsara indrindra, ahafahanao manome fiainana ny eritreritrao. Noho izany, atombohy ny fisainana ary mamorona modely an-taonina amin'ity fampiharana ity. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Tools Tags Blender mpilalao, Blender Player Apk, Blender Player App Post Fikarohana
Ampidino ny Injector Shanks Free Fire Apk ho an'ny Android 
Waplog Apk misintona ho an'ny Android [Chatting & Dating]